K: Dr Gordon Seagrave
လူတချို့က.. ကျနော့် ကို ဘယ်လိုပဲ ပြုမူ ပြုမူ.. ခင်ဗျားကို သိစေချင်တာက.. ကျနော်..ဗမာလူမျိုး တွေကို ချစ်လျက်ပဲ ဗျာ.. တဲ့။ ထပ်ပြော တာက.. အမေရိကန် လူမျိုး တွေ ကလည်း.. အခုလို.. လုပ်ရပ် လောက် နဲ့ တော့.. ဗမာ လူမျိုး တခုလုံး ကို.. ဆုံးဖြတ် အပြစ်တင် လိမ့်မယ် မဟုတ်ဘူး လို့..ကျနော် ရိုးရိုး သားသား မျှော်လင့် ပါတယ်.. တဲ့။
1917 A.B., Denison University, Granville, Ohio
Labels: Books , Burma History , Burma story , People , Reviews
၀ါး အခုလို အဖိုးတန်တဲ့ ပိုစ့်တွေကြောင့်ပဲ မကေရဲ့ဘလော့ကို ရောက်ခဲ့တာ... Thanksalot :)
စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ပြုစုထားတာပဲ၊ ကျေးဇူးမကေ
လေးစားစရာကောင်းတဲ့ ခုလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သမိုင်းကို ပြောပြပေးလို့ မကေကိုကျေးဇူးတင်လိုက်တာ။ မသိသေးတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေလည်းသိခဲ့ရတယ်။
တကယ်တော့ ဆရာဝန်ပီသသူ ဆရာဝန်တိုင်း အတွက်ရန်သူ၊မိတ်ဆွေ မရှိပဲ လူနာမှန်သမျှ ကုသပေးရမှာ သူ့သမိုင်းပေး တာဝန်ဗျ...... ဗမာပြည်ကို ဘဝတခုလုံး ပေးပြီး ချစ်တဲ့သူကို အခုလို ဆုံးရှုံးရတာ ဝမ်းနည်းစရာ လွှတ်ကောင်းဗျာ...
မသိသေးတာတွေ သိသွားရလို့ ကျေးဇူးပါပဲ။
ကြိုက်တယ်မကေ .. ကျေးဇူးမကေ
လေးစားစရာလူတစ်ယောက်အကြောင်း လာဖတ်သွားပါတယ်မကေ။ မသိသေးတာလေး သိလိုက်ရလို့ ကျေးဇူးပါ။
နမ့်ခမ်းဆေးရုံအကြောင်း ခဏခဏပြောသံကြားပေမယ့် အခုတော့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိသွားပါတယ်
မသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေ သိရလို့ တကယ့်ကို ကျေးဇူးပါ
Thank you and pay respect to philanthropist Dr.Seagrave!
(A journalist writing with good reference).
I read it in Renaissance site, it should describe full info of source.
Thanks Thu. They ( Nae Thit )posted it with my permission. I really aprreciate your concern of copy right.
တန်ဖိုးရှိတဲ့ သမိုင်းမှတ်တမ်းလေးတစ်ခု ဖတ်ခွင့်ရလိုက်ပါသည် ။ :)
ဘယ်လိုဖွင့်ဆိုရမှန်းမသိပါဘူး။ တန်ဖိုးရှိကောင်းမွန်လွန်းတဲ့ စာလေးပါ ။ ကျေးဇူးအများကြီးပါ ...ဆရာဝန်ကြီးရော မမရော။
Thanks sis Kay for sharing about Dr Gordon Seagrave. The first time I have read about Dr Gordon Seagrave from ma Kay's Blog. It is also interesting to readabit about civil war after independence.
Thank you so much "KAY".
Your post (article)about Dr.Gordon Seagrave remind me of (3) doctors which I admired in my heart,(Dr.Seagrave, Dr. Norman Betthune and my late rector of I.M(1)-Dr.U Ba Than(Surgeon).You beautifully weaved the life of Dr.Seagrave with colourful yarns and perspective views.A Medical Doctor has no enemy but all the patients are his friends who need his art of HEALING.